नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : घाँटीमा गोली हानी छठ मनाइरहेका एक युवाको हत्या !
घाँटीमा गोली हानी छठ मनाइरहेका एक युवाको हत्या !
छठ मनाइरहेका एकजना युवाको जनकपुरस्थित अंगराजसर पोखरीमा शनिबार बिहान ३ बजेतिर गोली हानी हत्या गरिएको छ । जानकी चोकमा चस्मापसल गरेर बसेका २५ बर्षीय मुकेश दत्तको अज्ञात समुहले गोली हानी हत्या गरेको हो । राती जाग्रमा बसेका मुकेश र अन्य साथीहरु पोखरी किनारामा तास खेली रहेको बेला पैदल आएका एक समुहले उनको घाँटीमा गोली हानेको थियो । गोली लागेर ढलेका मुकेशलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजादै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो । गोली चल्दा करिव सय मिटरको दुरीमा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाका लागि खटिएका थिए । डिएसपी पोखरेलले भीड ठूलो रहेको र पडकाहरु पढ्की रहेकाले....
गोली चलेको अनुमान लगाउन नसिकएको बताए । गोली लागेर ढलेरपछि होहल्ला भएपछि मात्र प्रहरी थाहा पाएको थियो । त्यस क्षेत्रमा हजारौ तिर्थालु छठ मनाइरहेका थिए ।